Indawo: Ikhaya » Ukuthumela » zezindiza » Ingxenye ye-Airbus Fleet ayiphephile ngokusho kweQatar Airways
I-Airbus ikhiphe i-oda elikhulu lendiza entsha evela eQatar Airways
Ngemuva kokuthi i-Qatar Airways isimise cishe ingxenye yemikhumbi yayo ye-A350 futhi isithathe ingxabano nayo Airbus eNkantolo Ephakeme yaseLondon, umklami wamabhanoyi waseYurophu umemezele ukuthi "unqamule" inkontileka nesinye sezinkampani "ezinkulu ezintathu" zesifunda se-Gulf yezindiza ezingama-50 ze-single-aisle A321neo.
Embangweni owandayo mayelana nokumiswa kwendiza i-A350, Qatar Airways iyekile ukwamukela ukulethwa okwengeziwe kwendiza enomzimba obanzi evela Airbus kuze kube yilapho inkinga yokucekelwa phansi kwezindawo zefuselage yangaphandle isixazululiwe.
Umdondoshiya we-aerospace uvumile ukuthi kukhona ukucekelwa phansi kukapende, okungaveza obala i-mesh eyinsimbi evikela izindiza ekushayweni kombani.
Kodwa Airbus uthi lolu daba alunazo izinkinga zokuphepha emoyeni.
Qatar Airways ifune isinxephezelo esingamaRandi ayizigidi ezingu-618, kanye namaRandi ayizigidi ezine ngaphezulu ngosuku ngosuku ngalunye izindiza ze-A4 zigcinwe zingasebenzi.
Ngokubuyisela, Airbus ithathe isinyathelo esimangalisayo sokukhansela i-oda le-Qatar Airways lezigidigidi zamarandi lezindiza ezingu-50, “ngokuvumelana namalungelo ayo.”
Ngokusho komenzi wendiza, ikhansele imiyalo ye-A321neo ngoba Qatar Airways yehlulekile izibopho zayo zenkontileka ngokwenqaba ukudiliva izindiza ze-A350.
I-oda belibiza ngaphezu kuka-$6 billion ngezintengo zekhathalogi, nakuba izindiza ngokuvamile zikhokhiswa imali encane ngokuthenga okukhulu.
Lezi zinkampani ezimbili zibe nokulalelwa kwazo okokuqala eNkantolo eNkulu yaseLondon ngoLwesine.
Ukulalelwa kwecala okusha kuhlelelwe isonto lika-Ephreli 26.
Isitatimende se-Qatar Airways ngendiza ye-Airbus A350
Airbus iNkantolo London Qatar Qatar Airways